Iyavuthwa ekaHlatshwayo eya kuPirates – Bayede News
KUBUKEKA kothi kushaya umhla zingama-31
Posted on 16/08/2019 22/08/2019 by Bayede-News
KUBUKEKA kothi kushaya umhla zingama-31 kwephezulu okuwusuku lokuvalwa kwewindi lokudayiselwana kwabadlali kuligi yakuleli i-Absa Premiership, isitobha seBidvest Wits sobe sesigijima ku-Orlando Pirates.UThulani “Tyson” Hlatshwayo sesiside isikhathi egaqelwe eziMnyama, kodwa muva nje ngathi kungenzeka imthole.
Okwenza kubukeke engathu uTyson kungenzeka azishiye izitshudeni (iWits), inkulumo yakhe emvakomdlalo wangolwesithathu ezakhe kade zitholene nePolokwane City ibibukeka icacisa ukuthi naye ulindele noma yini kulesikhathi.“Ngiyazi khona amaqembu angigaqele kodwa ngisanenkontileka neWits,ngeke ngiqambe amanga sengihlale isikhathi eside kuyona manje sengifisa ukuyosebenzisa amava ami kwenye indawo. Kusele amasonto amabili ngaphambi kouthi kuvalwe iwindi, kulele kubaphathi ukuthi bathini ngekusasa lami,” kusho uHlatshwayo.
Lesi sitobha sifike kuziTshudeni ngowezi-2014 sisuka ku-Ajax Cape Town, usedlale imidlalo eli-114 washaya amagoli ali-15. Lo mdlali akagcini ngokugijima kuWits kuphela kodwa naseqenjini lesizwe iBafana Bafana ukhona njengoba enguKaputeni, khona usedlale imidlalo engama-43 washaya amagoli amathathu.
UGavin Hunt ocija iWits ephawula ngaloludaba uthe: “Kunobhutshuzwayo kunzima ukuthi ungaqagela ukuthi kwenzkalani. Kulo mdlalo kwenzeka izinto ezithusayo, uKhama Billiat uhambe eyifree agent eya kuKaizer Chiefs esuka kuMamelodi Sundowns kodwa manje isifuna ukumuthenga ngezigidi. Ngamafuphi nasodabeni lukaHlatshwayo kunjalo, yize eneme eqenjini kodwa lokho ngeke siziqhenye ngakho,” kubeka uHunt.
Umqeqeshi wePirates uMilutin “Micho” Sredojevic uthe ukulindele ukwamukela lo mdlali kwezimnyama.“Akekho umqeqeshi ongeke aze afise ukucija ukaputeni weqembu le sizwe, angeke ngiqambe amanga ngilindele ukwamukela lo mdalali eqenjini. Yize bekhona abadlali kodwa isitobha siyasidinga, uma singathola uHlatshwayo kobe sekusho ukuthi isikwati sethu siqine ngokwanele,” kuchaza uMicho.
IPirates ngoLwesithathu ibhaxabulwe iSupersport United ngamagoli amathathu eqandeni, amagoli angene ngenxa yokuba budedengu kwezitobha. Uma uHlatshwayo engagcina esayina kofezeka iphpho lakhe njengoba ngowezi-2017 wakubeka kwacaca ukuthi uma engayanga phesheya ufisa ukubeka amakhokho ethala egijima kuzona eziMnyama.